TikTok သည် အများဆုံး ဗီဒီယို အရှည် ကို ၁၀ မိနစ် အထိတိုးချဲ့ သည် – Pandaily
Mar 01, 2022, 12:11ညနေ 2022/03/01 14:14:59 Pandaily
ပေကျင်း အခြေစိုက် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Bytedance ပိုင် ဗီဒီယို မျှဝေ ခြင်း ပလက်ဖောင်း Chuntone က တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်၎င်းသည် အများဆုံး တင်ပို့ သည့် အရှည် ကို ၁၀ မိနစ် အထိတိုးချဲ့ လိမ့်မည်.
“ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် က ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်း ကို Buzzyon ပေါ်မှာ ဖန်တီး ဖျော်ဖြေ ဖို့ အချိန် ပို ပေးနိုင်တဲ့ ၃ မိနစ် ကြာ ဗီဒီယို တွေကို စတင် ပြသ ခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့ မှာတော့ ၁၀ မိနစ် ကြာ ဗီဒီယို တွေကို တင် နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို စတင် ပြသ နိုင် ခဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့ ဝမ်းသာ မိ ပါတယ်၊ ဒါက ကမ္ဘာ တစ်ဝ န်းက ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီး သူတွေအတွက် တီထွင် ဖန်တီးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ တွေ ပိုမို ရရှိ စေ မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့် ပါတယ်” လို့ Buzzyon ရဲ့ ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိ သူက ပြောပါတယ်။
Chuntone သည် ဖန်တီး သူများနှင့် အသုံးပြု သူများကို အကြောင်းအရာ ပိုမို ကြာရှည် စေ သောကြောင့် သူတို့၏ ပြိုင်ဘက် များက ဆန့်ကျင်ဘက် ပြု ကြသည်။ Instagram က Reels လို့ခေါ်တဲ့ ဗီဒီယို ကလစ် အတို လေး တစ်ခု ကိုထုတ်လွှင့် ခဲ့ပြီး YouTube က ရုပ်ရှင် အတို လေး တစ်ခု ကိုထုတ်လွှင့် ခဲ့ပြီး Snapchat က Spotlight ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဒီ ကုမၸဏီေတြက ဗီဒီယုိ အေၾကာင္းအရာ ေတြကုိ ပုိမုိ တုိ ေတာင္း ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစား ေနပါတယ္။
စက်မှုလုပ်ငန်း အတွင်းမှ လူ များက ပိုမို ရှည်လျားသော အကြောင်းအရာ ပုံစံ များသည် မကြာခဏ ပိုမို အကျိုးအမြတ် များပြီး သုံးစွဲ သူများကို ပလက်ဖောင်း ပေါ် တွင်ပိုမို ထိရောက်စွာ ထား ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လေ့လာသုံးသပ် သူများက TikTok သည်ပိုမို ရှည်လျားသော ဗီဒီယို များ အတွက်သင့်လျော်သော display mode ကိုဖန်တီး ရန်လိုအပ် နေသေး သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုသူများ ကြည့်ရှု လေ့ ရှိသော ဒေါင်လိုက် အကြောင်းအရာ feeds များအတွက် မသင့်တော် သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Sensor Tower က ဇန္န၀ါရီ လက ထုတ္ျပန္တဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြအရ Chuntone အသံုးျပဳ သူေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ပလက္ ေဖာင္း ေပၚမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ ေလာက္ သံုးစြဲ ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထို အရေအတွက် တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁. ၃ ဘီလီယံ ရှိရာမှ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက် လာသည့် တရုတ် ပြည်မ ကြီး၏ iOS ဗားရှင်း Buddy အတွက် အရောင်းအ ၀ ယ် များပါဝင်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် Vanyin ၏ စားသုံးသူ အသုံးစရိတ် သည်ဒေါ်လာ ၈ ၂၄. ၄ သန်း အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် အလားတူ ကာလက ဒေါ်လာ ၃ ၈၂. ၄ သန်း ထက် နှစ်ဆ ပိုများသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် TikTok ၏ စားသုံးသူ အသုံးစရိတ် သည်ဒေါ်လာ ၂. ၃ ဘီလီယံ ရှိပြီး နှစ်စဉ် ၇၇% တိုးတက် ခဲ့သည်